Haingam-piasa…vokatra tsara | NewsMada
Enina andro sisa dia higadona eto Madagasikara ny papa Fransoa. Efa miomanomana ny amin’ny fandraisana azy avokoa ireo sehatra maro eto amin’ny firenena. Tena miezinezina ny fandraisana ary hanairana ny sokajy samy hama haneho fahamatorana sy fahavononana tsy hisy tomika amin’izany fandraisana papa izany.
Nahatsara zavatra ny fivahinian’ity raiamandreny ara-panahy ity eto amin’ny firenena. Betsaka ny asa tsy maintsy nenjehina tao anatin’ny fotoana fohy, ny lalana, ny fanadiovana, ny fotodrafitrasa goavana…. Tsy maintsy novitaina tao anatin’ny volana vitsy avokoa izany. Tsy maintsy nahitana tetibola nahafahana nanatanteraka ireo: asa maika, tsy maintsy vita, vitaina tsara. Mahavelombolo raha toy izany hatrany ny fomba fiasa. Maha te hidera raha toy izany hatrany ny hakingana sy ny vokatra azo. Mailamailaka ireo mpiasa manenjika ny fahavitan’ny asany satria tsara tohana. Tonga haingana ny fitaovana hiasana. Vita haingana sy tsara koa ny vokatra azo avy eo.
Toraka izany ny mpitandro filaminana maneho fahavononana amin’ny fiarovana sy ny fandaminana rehetra. Ny kristianina katolika maneho firaisankina tanteraka amin’ny fiomanana sy ny fandraisana na misy aza ny tsy fitovian-kevitra politika.
Irina hitohy izao fiaraha-mientana izao na efa tsy ho eto intsony aza ny papa. Tokony ho toy izao ny fomba fiasa na tsy mandray vahiny goavana aza i Madagasikara. Takina vokatra haingana sy tsara ny antokon-draharaha rehetra ahafahana miroso haingana amin’ny fampandrosoana. Tsy tokony hisy intsony ny fomba fiasa lavareny sy mitarazoka fa sady mahamonamonaina no mitarika amin’ny fahantrana.
Raha mitohy ny toy izao, ho tanteraka haingana ny vinan’ny IEM imatimatesan’ny filoha ankehitriny sy ireo ekipa miara-dia aminy ary ho fitaratr’izay fitondrana mifandimby any aoriana ny fomba fiasa raha voatana sy mbola mihatsara ny toy izao.